🥇 ▷ Cayayaankaani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka dhisto magaalada Tilted Town ✅
Cayayaankaani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka dhisto magaalada Tilted Town
by Jimmy Russo, Ogast 6, 2019
Kordhinta Tilted Town ayaa caro ka muujisay tartanka. Bulshada Fortnite inay soo qaadaan farsamooyinka ugu muhiimsan ciyaarta. Buuggan cusub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka dhisto aagga Leaning City oo aan lahayn dhismo.
Tirtir mid ka mid ah farsamooyinka ugu muhiimsan ee Fortnite oo ay weheliso Tilted Town oo runtii ah inaad wax badan ka qabato bulshada xanaaqsan ee Fortnite Waxay u arkaan tan inay tahay isbeddel xagga dhaqaajinta dhismayaasha gebi ahaanba, taas oo asal ahaan calaamad u noqon doonta geerida ciyaarta.
Tani waxay noqon kartaa mid bulshada aad uga badan. Tilted Town weligeed kuma jiri doonto ciyaarta, Epic ayayna u badan tahay inaysan tirtirin sababta kaliya ee ciyaartu ay weli caan u tahay.
Weli, tani waa welwel dad badan qaba. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in wali ay jiraan dariiqooyin looga dhiso magaalada Tilted Town kana faa iideysan karaan xaqiiqada ah in uusan qof kale awoodin.
Waxa aad ugu baahan tahay cayayaankaani waa hoverboard, qori iyo wax qalab dhisme ah.
Khaladaadka dhismaha ee magaalada dhaadheer! Waxay kaloo u adeegtaa inay ku guuleysato saameynta lo’da ee magaalada dibaddeeda. (Via @remyfromars) ee r / FortNiteBR
Sidaad arki karto, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad naftaada ku toogato aagga “ha dhisin” adiga oo taagan meesha kore. Markaad taas samayso, waad ku dhisi kartaa meelkasta oo aad rabto.
Ciladdan ayaa loo badinayaa in la sixi doono goor dhaw, mana aha tan ugu fudud in la sameeyo.
Wali, degitaanka bannaanka Tilted City, qabashada hoverboard, iyo fidinta 90-ka halka qof kale uusan dhisi karin ayaa hubaal kaa dhigi doona inaad si bilaash ah wax ku disho.
Nagala soo xiriir Twitter @FortniteTracker si aad u hesho Fortnite News dheeraad ah